Apartament en Roní (PORT Aine) - I-Airbnb
Roni, Catalunya, Spain
Iflethi inegumbi lokutyela elinekhitshi elincinci, ibhalkhoni, isofa, i-Smart TV . Ikhitshi liza nefriji, umatshini wokuhlamba impahla, i-microwave, isitovu se-ceramic, izixhobo zasekhitshini, i-Nespresso kunye nomatshini wokwenza ikofu oqhelekileyo. Igumbi lokuhlambela ligqityiwe. Inamagumbi amabini, enye inebhedi elala abantu ababini enye ineebhedi ezimbini ezilala umntu omnye. Yiflethi okanye indlu ekwicomplex ephantsi ekulula ukungena kuyo. (sineflethi okanye indlu ekwicomplex ekwicomplex ekwicomplex ekwicomplex ekwicomplex eRoní)
Le flethi okanye indlu ekwicomplex, ekwidolophana yaseRoní, kwimizuzu embalwa ukusuka kumathambeka e-ski ePort Ainé, kwimizuzu eyi-5 ukusuka eRialp nemizuzu eyi-10 ukusuka eFlorida. Yindawo entle yokuchitha iintsuku ezimbalwa uphumle uze wonwabele indawo ekufutshane nePyrenees. URoní yilali yasezintabeni, embindini wePyrenees, enabemi abambalwa, ngoko ke cwaka kakhulu, ilungele ukukhupha unxibelelwano, kwaye, kwimizuzu embalwa ukusuka eFlorida.
4.83 · Izimvo eziyi-40
URoní yidolophu ekumasipala waseRialp, kummandla wePallars Sobirá.
Ime kwindawo ephakamileyo yeemitha eziyi-181. Izindlu ezikule lali zilungiswe ngokusuka kwisitrato esinye esisembindini, iCarrer Mayor, embindini apho sifumana isikwere. Ngenxa yokuba ikufuphi kumathambeka ePort-Ainé ski (iikhilomitha eziyi-10), ilungele imidlalo yasebusika. Kwintwasahlobo unokuziqhelanisa nokubethwa ngumoya kunye nezinye izinto ezikhethekileyo kuMlambo i-Noguera Pallaresa. Kufuphi neepaki zendalo zokunyuka intaba nokonwabela indalo.
Inombolo yomthetho: HUTL-040831
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Roni